KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Sommaali lagu xukumay Dalka Japan
Friday 1 February 2013 23:01
Sommaali lagu xukumay Dalka Japan
Nairobi (KON) - Waxaa Maantay lasoo gabangabeeyay Maxkamad ka socotay Dalka Japan oo lagu saaray Niman Soomaali ah oo lagu soo qabtay Xeebaha Soomaaliya laguna soo eedeeyay Burcad Badeednimo.
Maxkamadaan oo ka socotay Caasimada Dalka Japan ee Tokyo ayaa Labadaan Nin oo Soomaalida ah ku riday xukun min toban Sano oo xabsi ah.
Wakaalada Wararka ee Dalka Japan ayaa sheegtay in Labadaan Nin oo lagu magacaabo Maxamed Urgus Caddeysey iyo Cabdinuur Xuseen Cali ay qorteen inay in ay ka dambeeyeen isku day lagu afduubi lahaa Markab.
Markabkaan oo ah nooca Shidaalka qaada ah oo u shaqeeya Shirkad Japan ah ayaa lagu afduubtay Xeebaha Soomaaliya.
Waa xukunkii ugu horreyay ee noociisa oo kale oo ka dhaca dalka Japan.